Kedu otu m ga esi edozi Silverlight na Windows 10? - Microsoft
Isi > Microsoft > Nsogbu Microsoft silverlight - otu esi edozi
Nsogbu Microsoft silverlight - otu esi edozi
Kedu otu m ga esi edozi Silverlight na Windows 10?
Wepu / WepuÌhè:
Mechie oge niile Internet Explorer, gụnyere nke a.
Pịa bọtịnụ Malite.
Pịa APPS & FEATURES.
Pịgharịa gaa naMICROSOFT SIILEma pịa ya.
Pịa Wepu ya.
Gịnị bụ Microsoft Silverlight na gịnị kpatara m ji chọọ ya?
Ọla ọlabuNke Microsoftteknụzụ iji melite ọdịnaya weebụ yana ahụmịhe Internetntanetị zuru ezu. NaỌla ọla, ihe nchọgharị nwere ike igwu MP3, WMV na WMA faịlụ na-enweghị Windows Media Player mmeghe ma ọ bụ njikwa WMP ActiveX. Ọ na-akwado ọdịnaya dị iche iche dị iche iche dị ka ihe nkiri, ọkpụkpọ vidiyo, na atụmatụ mmekọrịta.Jul 22 2008
Ihe ederede a bu mmeghe nye Silverlight Aha m bu Jeremy Osborne, onye weputara webSilverlight ọdịnaya nke Microsoft site na ulo akwukwo ihe omuma nke Qin, na-enye otutu ihe omuma di iche iche, ya mere na ihe nkpuru a dika ihe omuma ihe omuma, tinyere web web service web -Games and a gụnyere ọbụna ngwaọrụ mkpanaka.
Anyị ga-eleba anya na ụfọdụ n'ime ihe atụ ndị a, m ga-pịa njikọ Ngosiputa na ihe anyị ga-ahụ bụ n'ezie ezigbo ezigbo ihe atụ na ngwa Silverlight naanị ebe a anyị nwere ọtụtụ thumbnails nke ọ bụla bụ ngwa Silverlight ma ọ bụ weebụsaịtị na-anọchite anya ya. Can pụrụ ịhụ na ka m na-anyafe na nke a ụbọchị nke a gbakwunyere na-egosi na a obere mmapụta Ihe dị mma banyere saịtị a bụ na ọtụtụ n'ime ihe ndị a bụ ndị ọrụ edobere ma ị nwere ike ịhụ nke kachasị ọhụrụ ebe a Okwu oke nkume na nsonaazụ anyị ejirila naanị otu ngwa nke ihe ncheta nkume siri ike ka anyị gaa n'ihu wee pịa nke ahụ ma anyị ga-eweta peeji a na windo ọhụụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ihe ncheta ya nke siri ike ugbu a jiri nwayọ ihe anyị nọ ebe a n'ezie bụ otu ngwa Silverlight agbakwunyere na webpage yana wuru ngwa Silverlight site na iji teknụzụ abụọ, nke a na-akpọ deepzoom Composer na nke ọzọ na-egosipụta ugbu a, nkwupụta okwu bụ akụkụ nke Okwu Nkwupụta Studio, ebe mbugharị miri emi bụ ngwa na-adaghị adaba nke ị na-ebudata n'ezie free nwere ike, ya mere, ihe anyị nwere ike? Ana m ele ọtụtụ thumbnails ebe a na thumbnail ọ bụla na-anọchi anya otu ihe dị na nnukwu nkume memorabi lia collection ugbu a Ihe omimi mbugharị miri emi na-amalite mgbe m malitere mbugharị na otu n'ime thumbnails ndị a, enwere m ike iji akwụkwọ mpi m mee nke a Na-eme ka m nwee ike ịhọrọ ihe m na-achọ mgbe m na-abanye na ya. Hụ na mgbe m bupụrụ ruo n'ókè ụfọdụ, obere mmapụta na-egosi n'aka nri nke na-agwa m ntakịrị ihe banyere isiokwu a ebe a.
Enwere m okwu mkpuchi nke eriri Bob Marley nke 12, yabụ nke ahụ dị mma ma ị ga-ahụ na mkpebi dị ebe a dị ịtụnanya, enwere m ike ịbawanye aka ebe ahụ wee hụ ụfọdụ nkọwa na agaghị m eche maka ọzọ dịka nke a dum Emere ngwa a na ngwakọta nke Deep Zoom Composer na Expression Mixer na-edozi ụdị ihe ndị a site na onye na-ese ihe ka ihe atụ, m ga-aga nke mbụ ebe a, Beatles na mgbe m pịrị na ị ga-ahụ na enwere 31 ugbu a ihe ndi edere, ya mere nani ebe a bu ihe omumu nke agagh enwe ike imeghari na HTML, gbakwunyere na i nwere ike ihu ufodu mkpebi ebe a. Ọ bụ ihe ịtụnanya dị ịtụnanya mgbe m batara n'okwu a, m lere anya na aka ederede ederede n'ihi na mgbe guitar na-ebe nwayọ na-ebe ákwá, anyị nwere ike ịhụ mkpọchi zuru ezu n'otu ebe n'otu oge ahụ ị nwere ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ ebe a n'aka nri, dị ka ikike kekọrịta njikọ a ikike ịpị njikọ dị na mpụga ma mụtakwuo banyere ihe aOK M ga-emechi windo nchọgharị a ma lelee atụ ọzọ Ugbu a ihe atụ a dị na iwu Microsoft ihe atụ a na-egosi anyị ngwa Silverlight nke na-ejikọ akụkọ weebụ yana ebe anyị nwere ahụmịhe mmekọrịta nke na-enye m ohere ijigide ekwentị ọ bụla ma mụta ntakịrị gbasara ha n'okpuru. Enwere m obere akwụkwọ mpịakọta ebe a nke na-enyere m aka ịpịgharịa na nke a otu oge bụ njikwa ọdịnala nke emere na ngwakọta na-enweghị nkwupụta yana n'oge ọ bụla enwere m ike ịpị nke ọ bụla n'ime ihe ndị a wee banye ugbu a na ntakịrị y m tụgharịrị gbanyụọ ụda ka anyị wee ghara inweta ahụmịhe zuru oke ebe a.
Ihe m ga - eme bụ pịa bọtịnụ ahụ, kwuo okwu ngosi naanị iji gosi gị atụmatụ ole na ole ndị ọzọ mejupụtara Nkwupụta Ngosipụta ebe a n'etiti. Enwere m ngwaọrụ mkpanaaka Windows a ma ị nwere ike ịhụ na enwere ntakịrị mmịfe ebe ahụ mgbe m pịa ma dọrọ m ga-enweta nlele ogo 360 n'otu oge ahụ anyị nwekwara igbe ndepụta a n'aka nri na na ndepụta ndepụta a enwere m ike ịmụ ntakịrị ihe banyere software dị na ekwentị ahụ enwere m ike ịchọpụta ebe m ga-esi nweta ekwentị n'ime ihe atụ abụọ a egosipụtara m gị na e nwere otu ndị mmadụ na-arụ ọrụ ahụ ma ụfọdụ ọrụ dị na ọrụ ahụ nwere ike ịgụnye ndị na-emekọrịta mmekọrịta, ndị na-ahụ ihe ngosi, na ndị mmepe iji ghọta ọrụ izizi Silverlight Bit ka mma na anyị nwere eserese a n'ihu anyị, otu ahụ ka e si kee ọdịnaya okike ọdịnaya metụtara na ịmepụta ngwa Silverlight. Ka anyị bido n’aka ekpe ma mee ka anyị nwee Mmepụta Ngosipụta Ngosiputa Ngosipụta bụ ọkachasị ngwa onye mepụtara na ngwa a, onye nrụpụta ga-ekepụta ihe dịka bọtịnụ, ihu ndị ọrụ, ma ọ bụ naanị ihe atụ iji mee ihe na Expressionblend Expression Mixing na-ewere ọnọdụ ebe a. , nke bụ ebe ọtụtụ ihe na-eme ebe a ma mezue njirimara onye ọrụ gị.
I nwekwara ike ịgbakwunye eserese eserese na onyonyo. Na nke a, ederede n'okpuru nọchiri anya ya encoders okwu. Agbanyeghị, iji tinye mmekọrịta na ngwa Silverlight, onye nrụpụta ga-abanye n'ime Visual Studio iji mee ya, ma ọ bụ yikarịrị ka onye nrụpụta ga-aga Visual Studio iji tinye mmekọrịta na mmemme agwakọta ngosi.
Ihe dị mfe dị ka ịpị bọtịnụ iji mepụta animation Ugbu a ị nwere ike ịhụ na eriri jikọrọ n'etiti ngwa ndị a niile bụ ihe a na-akpọ Zamelas. Ntuziaka ngwa a kọwara ebe a site na Visual Studio dị na nke a site na Ngosipụta Iche.
Gwakọta ma kwekọọ na nke a na-enye ndị otu mmepe na ndị nrụpụta ọrụ aka ịrụ ọrụ nke ọma. N’akụkụ a anyị elelewo ụfọdụ atụmatụ dị na Silverlight Authoring Workflow n'oge a aha m bụ Jeremy Osborne nke Qlọ Ọrụ Qingraphics maka Microsoft gosipụtara gị.
Kedu ka ị si ewegharị Microsoft Silverlight?
Na Windows 7 ma ọ bụ Windows XP, pịa bọtịnụ mmalite> pịaMicrosoft Silverlightfolda> pịaMicrosoft Silverlight.
HichapụỌla ọlanchekwa ngwa:
Pịa Ngwa Nchekwa taabụ.
Pịa bọtịnụ Hichapụ niile..
Pịa Ee na Hichapụ ngwa maka saịtị Weebụ niile? ...
Ndewo, nke a bụ Jonathan King si k2 taa, anyị ga-agabiga ihe atụ nke ngwọta nchịkwa mkpesa.
touchpad egosipụta ihe niile
Ọnọdụ ahụ dị ka nke a: Onye na-akpọ ndị na-akpọ oku na-ewe mkpesa ekwentị n'aka onye ahịa Ndị ọrụ ndị ahịa na-ahụ maka nyocha na idozi mkpesa a jikọtara ọnụ oghere ọrụ ga-eme maka mkpesa iji weghara omume ozi niile, wdg, ma nke anụ ahụ na elektrọnik A ga-eweghara akwụkwọ ozi metụtara mkpesa ozugbo na ebe ọrụ. Uru dị na ụdị azịza a gụnyere otu echiche nke ọrụ niile yana akwụkwọ ozi metụtara nyocha mkpesa gbasara mkpesa na ngwọta megide usoro iwu nke na-enyere usoro iwu aka, dịka ndị nnọchi anya ọrụ akpaka na ọrụ ọrụ nye ndị otu aka nri na ndị otu, na-abawanye arụmọrụ site na akpaaka nke usoro ntuziaka na usoro ahaziri ahazi yana nsonaazụ njikwa njikwa na ọgụgụ isi azụmaahịa gbasara mkpesa niile yana otu esi eji edozi mkpesa ndị a dị iche iche teknụzụ iji mepụta ngosipụta a nke enyere site na Microsoft Dynamics CRM MicrosoftSharePoint ma ọ bụ Microsoft Silverlight Customer Information Management na Ahịa Ọrụ Charmer na-enweta oku site na Linda, bụ onye na-enweghị afọ ojuju na ogo nke a zụrụ n'oge na-adịbeghị anya nwere ike ịde akwụkwọ mkpesa ozugbo megide ndekọ ndị ahịa Linda na Capture Mkpesa Mkpesa ahụ malitere usoro nhazi mkpesa na usoro njikwa mkpesa na-aga n'ihu Ọ bụ ugbu a ọ bụ ọrụ ndị ọrụ ndị ahịa ka ha nyochaa ma dozie mkpesa ahụ, Jonathan ka onye otu ndị ọrụ ahịa nyefere ọrụ a ugbu a dịka onye ndụmọdụ maka ndị ahịa na-enye ndụmọdụ, na-arụ ọrụ ọtụtụ ụbọchị ya na ngwọta ewepụtara na Microsoft SharePointJonathan nwere ike mepee peeji nke nchịkwa mkpesa Nchịkọta saịtị nchịkwa a na-enye nkọwa nke mkpesa niile na-emeghe nke a na-enyocha ugbu a, nwere ike ịnye ozi oge na-aga n'ihu na arụmọrụ nke ndị otu / otu ya na-emezue na imezu mkpesa ndị a, yana ọtụtụ ọrụ dị iche iche Otu nke ihe aga-eme n’ezie iji anya nke uche hụ mkpesa niile na eserese a Echiche a na-enye ndị ọrụ ndị ahịa otu ụzọ dị mfe iji ghọta ma ọ bụ jiri anya nke uche hụ ebe a na-enyefe mkpesa dị iche iche na nke bụ ebe dị ọkụ nke mkpesa sitere na ya, anyị nwere ike ịhụ nkọwa Linda N'ebe a, edere ya na kaadị a Mkpesa ọ bụla nwere mpaghara ọrụ ya Jonathan nwere ike igwu ala n'ime mpaghara ọrụ ọrụ ahụ maka mkpesa Linda n'ime mkpesa mpaghara ọrụ n'onwe ya.
Enwere ọtụtụ ihe dị iche iche, enwere njikọta. Akwụkwọ abụọ na dọkụmentị faịlụ nwere ike ịnwe, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ iwu, nke ị hụrụ ebe a nke ejiri mejupụta ya na-akpaghị aka dabere na ụdị mkpesa emere, yana akpaghị aka nke akwụkwọ Okwu ndị ọzọ maka ọrụ ndị ahịa anyị - Iji nyere otu aka mepụta akwụkwọ ozi na ọdịnaya ndị ọzọ nke ihe ndekọ ahụ nwere ike ibute dị ka akwụkwọ ndị ahụ si na akwụkwọ mmekọrịta dị ndụ gaa na ndekọ ndekọ nke kwesịrị ka echekwa ya ogologo oge. . The ikpe nkebi n'ezie na-akọwa ndụ okirikiri nke mkpesa njikwa usoro The nnọọ kpọmkwem nkebi na anyị metụtara Mkpesa Review akwụ ụgwọ Lee a Solution Review ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa na a graphic n'ezie na-agba mbọ na-enye a dị mfe ma doo anya na nghọta nke ebe anyị nọ n'ime nke a lifecycle .
Ihe gbasara KPI na-enye anyị nghọta nke otu anyị si eme ụfọdụ nha arụmọrụ anyị na mpaghara resin ebe ndị mmadụ nwere ike itinye ụdị akụkọ nkọwa banyere otu esi edozi esemokwu ahụ na ikpe omume nke na-enye anyị ikike ịmalite usoro ezi uche dị na ya, ikekwe usoro dị n'okpuru ma ọ bụ obere omume metụtara mkpesa a, dị ka B. ịmepụta akwụkwọ ozi ndị ahịa ma ọ bụ ịmepụta nyocha maka mkpesa ahụ n'oge ahụ. N'ikpeazụ, enwere ndepụta ọrụ ugbu a. Nke a bụ oru nke oma enyere Jonathan, kpomkwem ka inyochaa ma hazie mkpesa ahu ma kwalite usoro a mgbe Jonathan na enyochaghari mkpesa ahu ka o gha achota ihe onye nbinye ego kporo ozo ma juo ebe mkpesa nyocha di ugbua.
dragon nnyemaaka ngwa
Ọ bụrụ otú ahụ, ọ pụrụ ikpebi ime ka ikpe ahụ ka njọ. Ọ nwere ike iji ihe omume ahụ mee n'ezie ịmalite ịmalite ịmalite ikpe You nwere ike jupụta na nkọwa ụfọdụ wee họrọ ọkwa ọ ga-achọ ịmara nke ọma n'okwu a E jidere ozi a niile maka mkpesa ma hụ onye ọ bụla, nke na-abata Linda mkpesa na-arụ ọrụ ebe dị ka anyị pụrụ ịhụ na mkpesa ugbu a abawanyele na anyị ugbu a na-edo edo ọnọdụ na n'ezie ikpe escalation e n'ezie e dekọrọ dị ka akụkụ nke ikpe kwuru. Na nzaghachi maka mmụba a, Jonathan nwere ike chọọ izigara Linda akwụkwọ ozi nke ọ na-akọwa ebe usoro nyocha akwụkwọ mkpesa dị ugbu a.
Ọ nwere ike iji omume ikpe ahụ mepụta leta ndị ahịa yana ndebiri ma tinye ozi azụmaahịa niile metụtara okwu ahụ - nnukwu ego ma ọ bụrụ na ị chee ugboro ole ọ ga-eme ọzọ maka mkpesa niile ma ọ bụ maka ọnọdụ niile na ụlọ ọrụ gị anyị na-ahụ akwụkwọ ozi mepụtara ebe a na mgbe anyị mepere ya anyị nwere ike ịhụ ndebiri eji. juputara na ozi nke emepụtara mgbe anyị were mkpesa ahụ, na mbido anyị nwere ike ịhụ leta ahụ ebe a juputara na ozi kọntaktị niile dị mkpa sitere na Linda ma ọ ga-adị naanị maka Jonathan iji mejupụta akwụkwọ ozi ndị ọzọ. Ọ nwere ike ịchekwa nke a ma echekwara ya na weebụsaịtị maka mkpesa Linda ọ bụghị naanị na ọ mepụtara leta na iji ederede ma jiri ozi azụmaahịa na-ebute ya, anyị kwupụtakwara leta ahụ dịka ndekọ iji hụ na ọ bụ ihe akaebe na dịka iwu iwu ma ọ bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ si dị, enwere ike ịchekwa akwụkwọ ozi anyị kwesịrị ịnagide, anyị chọrọ ụzọ dị ngwa ma dịkwa irè iji mesoo mmekorita na-abata, ma ọ bụ site na ndị ahịa ma ọ bụ site na mpaghara ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ metụtara nnọkọ mmekorita nwere ike ịdị n'ụdị dị iche iche, ọ nwere ike ịbụ dijitalụ, ma eleghị anya site na email ma ọ bụ ma eleghị anya nke anụ ahụ, ma eleghị anya mmadụ na-ezigara anyị ọfịs akwụkwọ ozi anụ ahụ nke kwesịrị ka enyocha ma chekwaa ya na ntanetị, megide mkpesa a anyị nwere ike iburu ọnọdụ abụọ ahụ na akaụntụ dị azịza a, nke mbụ niile lelee etu anyị si ejikwa akwụkwọ ozi dijitalụ site na email.Ejiri mkpesa ọ bụla nwere ID pụrụ iche. N'okwu a, CH 360 17 na-aghọ Adreesị ozi-e pụrụ iche maka adreesị Mkpesa a. A ga-edekọ ozi email ọ bụla zigara na adreesị ozi-e na-akpaghị aka ma chekwaa ya na Ebe Ọrụ Mkpesa a, mana ka anyị mepee Microsoft Outlook ma zipụ ozi email ahụ ma hụ otu o si eme.
Anyị nwere ike ide ozi ọhụụ na adreesị ozi-e pụrụ iche nke emepụtara mgbe anyị debere saịtị ọhụrụ ahụ dị ka ụdị p nke usoro mkpesa anyị, mejupụta nkọwa ndị dị mkpa iji mee nke a site na email kpọgidere ihe niile ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa email mgbe ahụ ị nwere ike ịlaghachi na ibe mkpesa anyị wee hụ na echekwara email a na mgbakwunye niile na peeji mkpesa .Ọ ga-adị mfe maka ndị nnọchi anya ndị ahịa anyị ịhụ akwụkwọ ozi na-abata ma na-abata. Ha ka ha chekwaa na akpaghị aka.
Ọ na - ewepụ ọtụtụ nsogbu nke iji aka gị na - ebugharị akwụkwọ n'etiti ikekwe ike draịva ndị ọrụ yana ibe akwụkwọ mkpesa, ọ bụrụ na anyị mechie echiche ma laghachi na mkpesa anyị nwere ike ịhụ ebe a echekwala email ahụ. yana mgbakwunye naanị akwụkwọ ozi dijitalụ nke anyị ga-anabata anyị ga-enweta nnata anụ ahụ nke akwụkwọ ozi ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ, nyocha nke akwụkwọ ndị a na nchekwa dijitalụ ha na akara ngosi mkpesa, anyị nwere ike ime nke a na ọtụtụ gtechnologies nyocha dị iche iche anyị ga-eji ngwaahịa akpọrọ Ọmụma Ihe Ọmụma n'ọnọdụ ndị a. Ndị otu na-ahụ ụzọ dị iche iche iji nyochaa ụfọdụ nwere ọrụ nyocha nke etiti ebe ndị ọzọ nwere ọrụ nyocha ngalaba, ma ọ bụ ndị mmadụ nwere ngwaọrụ nyocha nke onwe ha na tebụl ha, enwere ike ịnabata ọnọdụ abụọ na ihe atụ a nke anyị ga-anọ mgbe anyị na-eji Ihe Ọmụma Lake Capture weghara a akwụkwọ ka i scanomi, anyị akwụkwọ mkpesa e dere ebe a. Anyị hụrụ na ọ bụ akwụkwọ ozi si n’aka Linda.
Anyị nwere ike ịdebanye akwụkwọ ozi a na ihe nchọpụta pụrụ iche Nọmba mkpesa ahụ anyị hụrụ tupu m nwee ike itinye nke a dịka ntụpọ pụrụ iche m iji hụ na a na-enyocha akwụkwọ a na-akpaghị aka wee debe ya ozugbo na akwụkwọ mkpesa ugbu a mgbe anyị mechiri ihe ọmụma anyị nwere dịka eg. B.
ijide ma laghachi na peeji mkpesa anyị, anyị nwere ike ịhụ n'ezie na edere akwụkwọ ahụ nke ọma megide mkpesa ahụ, yabụ anyị ahụla ụzọ abụọ dị iche iche iji nweta ụdị akwụkwọ mkpesa dị iche iche, ma ọ bụ dijitalụ ma ọ bụ nke anụ ahụ, ha abụọ nwere akara ala ahụ, a na-etinye ya ozugbo ebe ahụ megide mkpesa ahụ site na iwepụ ọtụtụ nsogbu nke ntinye akwụkwọ na ijide n'aka na akwụkwọ ndị ahụ na-ejikwa metadata ziri ezi ma debe ya n'ebe kwesịrị ekwesị. Jonathan nwere ike ịrụ ọrụ ya ugbu a nyocha akwụkwọ mkpesa. ọ nwere ike mepee ọrụ ahụ ozugbo na ndepụta ọrụ ebe a na ibe mkpesa. Nke a ga - eweta ụdị nke nwere ozi niile gbasara mkpesa, gụnyere ozi Lee wetara kpọmkwem site na Dynamics CRM site na Linda.
Nkọwa mkpesa nke anyị dere na mbụ, anyị nwere ike itinye ụfọdụ ozi ndị ọzọ na mkpesa a. Anyị nwekwara ike jikọta ya na ngalaba CRM dị ike ma lelee mkpesa ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ma ọ bụ lee nkọwa nke onye na-agbazinye ego na gburugburu ebe a. Anyị nwekwara ike ịkọwa ihe ga - eme ma ọ bụ ụdị mkpebi anyị chọrọ maka mkpesa ahụ.
N'okwu ahụ, anyị nwere ike ekenye anyị nkwụghachi ụgwọ anyị nwere ike ikwu na ọ bụrụ na anyị chọrọ inye Linda nkwụghachi, anyị nwere ike tinye nkọwa ndị ọzọ na ọgbakọ ahụ n'onwe ya ozugbo enwere ozi a niile nke ọma ma usoro a na-eme ka nyochaa mkpesa ahụ ọkwa ọzọ na ndụ ha. Anyị nwere ike ịhụ ebe a na ọrụ Jonathan apụla, ugbu a ọ rụchara ya, anyị nwekwara ike ịhụ, ọ bụrụ na anyị pịgharịa gaa na ọganihu nke okwu ikpe ahụ, na arụchaala mkpesa mkpesa ahụ agwụla ma anyị gafere ugbu a na ụgwọ nyocha nyocha. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịhụ ụzọ otu usoro a si aga n'ihu site na isoro usoro ntụgharị ele.
Echiche a na-enye ihe ngosipụta eserese dị mfe nghọta nke usoro ahụ utinggbaso usoro ndụ akwụkwọ ndụ bụ usoro ndị emechara na mbụ na ọkwa na-acha anụnụ anụnụ bụ ihe na-arụ ọrụ ugbu a, ebe a anyị hụrụ Jonathan c ka emechara Usoro Mkpesa Mkpesa ahụ mere mkpebi ahụ. inye ndị na-akwụ ụgwọ ma nyefezie iwu ka mmadụ nyochaa nkwụghachi ụgwọ a ma mee mkpebi ọzọ tupu emechi mkpesa ahụ
Microsoft Silverlight dakọtara na Windows 10?
Ọla ọlaa na-akwado usoro mmepe ugbu a na Internet Explorer10na Internet Explorer 11, na nkwado maka Internet Explorer10na-agwụ na Jenụwarị 31, 2020. Enwekwaghị nkwado maka Chrome, Firefox, ma ọ bụ ihe nchọgharị ọ bụla na-eji sistemụ arụmọrụ Mac.
Microsoft Silverlight bụ ngwa ngosiputa maka ide na ịde ngwanrọ Internetntanetị nwere arụmọrụ na ebumnuche ndị yiri nke Adobe Flash.
Xbox njehie 0x89234020
Oge Silverlight dị dị ka ihe nkwụnye maka ihe nchọgharị weebụ na-agba ọsọ na Microsoft Windows na Mac OS X. Ọ bụ ezie na nsụgharị mbụ nke Silverlight lekwasịrị anya na mgbasa ozi na-asọfe, nsụgharị ndị dị ugbu a na-akwado mgbasa ozi, eserese, na ihe nkiri, ma nye ndị mmepe nkwado maka asụsụ CLI. Na akụrụngwa mmepe. Silverlight bụkwa otu n'ime nyiwe mmepe ngwa abụọ maka Windows Phone, mana ibe weebụ ndị na-eji Silverlight enweghị ike ịgba ọsọ na Windows Phone ma ọ bụ Windows Mobile nsụgharị nke Internet Explorer n'ihi na enweghị nkwụnye Silverlight maka Internet Explorer na nyiwe ndị ahụ.
Microsoft weputara nsụgharị ise nke afọ ise: nke mbụ ewepụtara na 2007; nke ise na Mee 8, 2012. Ọ dakọtara na nsụgharị nke Internet Explorer, Mozilla Firefox na ihe nchọgharị weebụ nke Google Chrome na sistemụ arụmọrụ Microsoft Windows, yana Firefox na Safari na Mac na OS X, yana iji ekwentị mkpanaaka na-eji Windows Mobile na Symbian Nyiwe. Emeputara ngwanrọ ngwanrọ akpọrọ Moonlight, nke Novell mepụtara na mmekorita ya na Microsoft, wepụtara iji weta arụmọrụ nke Silverlight mbipute 1 na 2 na Linux, FreeBSD, na usoro ntanetị ndị ọzọ - ọ bụ ezie na ụfọdụ nkesa Linux anaghị etinye, na-ekwu maka redistribution na patent nchegbu.
Kaosinadị, na Mee 2012, a gbahapụrụ Moonlight n'ihi enweghị ewu ewu ya. Ejiri Silverlight jiri mee ihe na nkwupụta NBC nke Beijing 2008 Summer Olympics, Vancouver 2010 Winter Olympics, na 2008 Congresses maka isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị US.
Silverlight na-ejikwa Netflix maka ngwa ngwa ya Gụgharia ọrụ, mana Netflix kwuru na Tech Blog na 2013 na dịka Microsoft kwupụtara na njedebe nke ndụ Silverlight5 na 2021, a ga-ahụ ngbanwe n'ime afọ 8 na-esote ya na ebumnuche nke ịkwaga ka HTML5 edemede. Nlekọta Silverlight na-enye usoro eserese eserese a na-ejigide nke yiri Windows Presentation Foundation, na-etinyekọta ọtụtụ mgbasa ozi, eserese, mmegharị, na mmekọrịta n’ime otu oge ịgba gburugburu. Na ngwa Silverlight, a na-ekwupụta ihu ndị ọrụ na Mkpokọta Ngwa Mkpokọta ma tinye ha na mpaghara NET Framework.
XAML nwere ike iji kaa akara ngosi eserese na eserese. Enwekwara ike iji Silverlight mepụta Ngwa Windows sidebar maka Windows Vista. Silverlight na-akwado edemede H.264, Advanced Audio Coding, Windows Media Video, WindowsMedia Audio na MPEG Layer III ọdịnaya mgbasa ozi na ihe nchọgharị niile akwadoro, ewepu Windows Media Player, njikwa Windows Media Player ActiveX, ma ọ bụ Windows Media nchọgharị nkwụnye.
Maka Windows Media Video 9 bụ mmejuputa usoro VC-1 nke Society of Motion Picture na TelevisionEngineers, Silverlight na-akwado isiokwu VC-1. N'okpuru nkwekọrịta ikike onye ọrụ End, VC-1 na H.264 bụ naanị 'ikikere' maka 'ojiji nke ndị ahịa na ndị na-abụghị ndị ahịa'.
Silverlight akwadola H.264 edemede egwu ebe ọ bụ na nke atọ, na Silverlight na-enyere ike itinye nnabata nke asụsụ Extensible Markup nke enwere ike jikwa ya site na Usoro Ihe Nlereanya Akwụkwọ, usoro nke kwekọrọ na usoro Ajax ọdịnala. Silverlight na-enye ihe Downloader enwere ike iji ya budata ọdịnaya dịka ederede, ọdịnaya mgbasa ozi, ma ọ bụ data ndị ọzọ ngwa ahụ chọrọ.
Site na mbipute nke abụọ, enwere ike dee ederede mmemme na asụsụ NET ọ bụla, gụnyere ụfọdụ sitere na asụsụ mmemme a ma ama dịka IronRuby na IronPython.Adoption Dabere na statowl.com, Microsoft Silverlight nwere ọnụọgụ nke 64.16% na Mee 2011 y 2011 ghọrọ onye ndu ahịa Adobe Flash arụnyere na 95.26% nke ihe nchọgharị na Java kwadoro na 76.51% nke ihe nchọgharị.
Nkwado nke plugins ndị a abụghị otu; otu usoro nwere ike ịkwado ihe atọ a. Ọ bụghị weebụsaịtị niile chọrọ nkwụnye ihe nchọgharị; nke ndị na-eme ya, ihe na-erughị 0.3% nke saịtị Silverlight na Java (dịka nke August 26, 2011) na-eji 27% Adobe Flash, ọ bụ ezie na isi ọzọ na-ekwu banyere 4% maka Java.
Na-akwado nyiwe na Desktọpụ chọrọ Silverlight ihe x86 processor na nkwado maka nkwanye SIMD ndọtị. Ndị nhazi akwadoro gụnyere Intel Pentium III na nke dị elu, AMD Athlon XP na elu, yana AMD Durons ndị ọhụrụ. Tebụl na-esote na-egosi nnweta nnabata na ndakọrịta nke nsụgharị Silverlight maka sistemụ arụmọrụ dị iche iche na ihe nchọgharị weebụ mgbe David Storey, ChiefWeb Opener na Opera, kpughere akwụkwọ mpịakọta Microsoft maka ogbako MIX gosipụtara arụmọrụ opera dịka akụkụ nke Silverlight 1.1.
Ruo na Disemba 2011, agbanyeghị, Opera Silverlight anaghị arụ ọrụ na Opera site na mbanye anataghị ikike. Maka nke Silverlight 2, achọkwaghị mgbawa. Na Linux na FreeBSD, ọrụ ya dị site na Moonlight.
Moonlight dị na nkesa Linux kachasị na nkwado maka nchọgharị Firefox, Konqueror, na Opera mgbe azụrụ site na Novell. Miguel de Icaza gosipụtara mmasị na isoro ndị mmepe nke sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ na ihe nchọgharị rụọ ọrụ iji hụ na Moonlight na-arụ ọrụ na-enweghị ntụpọ na sistemụ ha. A mara ọkwa nnweta nke ọnwa Moonlight maka 1.0 maka FreeBSD na Machị 2009 mana akukoala kemgbe na arụghị ọrụ.
N'ihe gbasara 2011, ụdị ọnwa ọnwa ugbu a anaghị arụ ọrụ na ụdị nke Firefox ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ nke GNU / Linux. Agbanyeghị, enwere ike itinye ya na unofficially yana Firefox 11 ọ ga-arụ ọrụ ọfụma ma ọ bụrụ na awụnye ya. Dịka e kwuru n'elu, a gbahapụrụ ọnwa Moonlight na Mee 2012.
Pipelight ga - adị site na 2013. Ọ bụ nkwụnye maka ihe nchọgharị Linux nke, mgbe ejikọtara ya na Wine, na - eme ka ogbugbu nke ihe nchọgharị Windows, gụnyere Silverlight. Ngwaọrụ ekwentị Dị ka nke 2013, Silverlight adịghị na gam akporo ma ọ bụ iOS, sistemụ arụmọrụ a na-ejikarị na ahịa mkpanaka.
Silverlight bụ ụlọ ọrụ mmepe maka Windows Phone yana ọ dabere na Silverlight4. Maka nsụgharị ndị mbụ nke Windows Mobile, Ihe Nlele Teknụzụ Community mbụ bụ maka WindowsMobile 6 na-atụ anya na nkeji nke abụọ nke 2008, mana ọ kabatabeghị ọkwa. Microsoft anaghịzi elekwasị anya na iweta Silverlight na Windows Mobile 6.x.
Nokia ekwuputala atụmatụ iji mee Silverlight maka Mobile maka S60 na Symbian OS, yana usoro Series 40 yana mbadamba Nokia Internet. Silverlight maka Mobile na-akwado ọdịnaya Silverlight 2 na asụsụ NET.
Silverlight maka Windows Phone 7.5 dabere na Silverlight 4. Ngwaọrụ mmepe Enwere ike dee ngwa Silverlight na asụsụ NET ọ bụla.
Yamere, ngwa ọrụ mmepe ọ bụla enwere ike iji ya rụọ ọrụ na asụsụ NET nwere ike iji Silverlight rụọ ọrụ, ma ọ bụrụhaala na ha nwere ike iji Silverlight CoreCLR iji kwado ngwa ahụ karịa .NET Framework CLR.
Microsoft nwere Ngosipụta Nkwupụta Okwu Microsoft dị ka ngwa mgbakwunye maka Visual Studio maka imewe ngwa ngwa ọrụ ndị ọrụ Silverlight. Enwere ike iji Visual Studio wee zụlite ma dezie ngwa Silverlight. Iji wuo oru Silverlight ma nwee ihe omuma a bu CoreCLR, Visual Studio choro ihe ndi Silverlight maka Visual Studio.
Njikwa Silverlight bụ faịlụ .zip faịlụ .zip na usoro bnj ndepụta nke otu ma ọ bụ karịa jikwaa NET na faịlụ AppManifest.XAML nke nwere ndepụta ahụ yana ebe ntinye.
Enwere ike ịnabata ya na faịlụ HTML ọ bụla na mkpado ihe, dịka ọmụmaatụ: Ọrụ Silverlight nwere Silverlight.js ands Mepụta faịlụ Silverlight.js nke nwere nkwụnye Silverlight maka ojiji na peeji HTML bidoro, faịlụ XAML maka onye ọrụ interface na koodu-n'azụ faịlụ maka ngwa ngwa.
A na-eji ngwa ASP.NET arụ ọrụ ọlaọcha Silverlight. Visual Studio's CLR Remote A pụkwara iji arụ ọrụ debugging cross-platform debugging Silverlight, nke na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu dị iche.
Na njikọ na mwepụta nke Silverlight 2, agbakwunyere Eclipse dị ka nhọrọ maka ngwa mmepe. Akụkụ ụfọdụ nke koodu iyi Silverlight dị ka ngwanrọ mepere emepe, mana otu izu ka e mesịrị, Sam Ramji, Director nke Platform Technology Strategy na Microsoft, gọrọ akụkọ a site na nkwenye, na ụlọ ọrụ ahụ enweghị atụmatụ imeghe Silverlight. Controlsfọdụ njikwa na-abịa na Silverlight dị n'okpuru Microsoft Public License dị ka akụkụ nke ọrụ dị iche iche akpọrọ Silverlight Toolkit, Openness nke World Wide Web.
Ndị na - akwado sọftụwia na - akwado nsogbu na - echekwa Silverlight nwere ike ịbụ ihe atụ ọzọ nke atụmatụ Microsoft ịmakụ, ịgbasa, na ikpochapụ ibe anyị. Ma Microsoft Silverlight na Adobe Flash bụ ndị nwe ụlọ.
Filedị faịlụ Flash dị n'ụkpụrụ doro anya n'ihu ọha, dịkwa ka nke Silverlight. Agbanyeghị, nkwukọrịta n'etiti ihe ọkpụkpọ ọkụ na ihe nkesa na-ewere ọnọdụ site na iji usoro nkwekọrịta RTMP. Ma Flash ma Silverlight na-eji olu ọdịyo na nke codecs ederede.
Ntinye Mono Moonlight Mmezi Mono gbapuru mmepe Moonlight, mmejuputa uzo efu na mmeghe nke oge Silverlight 1 na nke abuo abuo. Emechiri mmepe na 2012 n'ihi nnabata na-adịghị mma nke Silverlight na mmachi mgbochi Microsoft nyere. Ndi Microsoft kwadoro oru ngo a, nke, site na nkwekorita ya na Novell, weputara ihe ndi ozo, uzo nke akwukwo akwukwo SilverlightBase nke APIs, koodu ọnụọgụ abụọ na okwu ikpe nye Mono. nyere otu.
'Agreement ahụ' nke enyere Novell ohere a naanị ohere ewepụtara usoro ekwekọghị na ikikere, nke kpuchitere ọtụtụ sọftụwia na-emeghe n'efu. Dị ka ihe atụ, ọ kwuru kpọmkwem na 'a ghaghị inweta ngwanrọ ahụ' kpọmkwem site na Novell ma ọ bụ site na onye nnata nke etiti 'yana' enyeghị ikikere n'okpuru GPLv3 ma ọ bụ ikikere yiri ya '. Fọdụ ndị na-akwado sọftụwia na-akwadoghị katọrọ nkwekọrịta ahụ.
Akatọla Silverlight maka ịghara imezu nkwa ya nke ndakọrịta sistemụ arụmọrụ, ọkachasị na sistemụ Linux, ma e jiri ya tụnyere nkwado ya dị ukwuu maka Apple na desktọọpụ Microsoft maka Internet Explorer, Firefox na Chrome. Agbanyeghị na Mi Crosoft sonyere na Moonlight Contributing Contract, Bruce Chizen, Onye isi oche nke Adobe Systems, nke na-ere ahịa usoro Flash a na-asọ mpi, jụrụ 'ntinye Microsoft maka idobe usoro Silverlight na sistemụ arụmọrụ na-abụghị Windows.' Nchegbu ya dabere na 'ihe atụ sitere n'akụkọ ihe mere eme'. 'ebe o kwuru na Microsoft ulo oru ngwaahịa na nkwa nke na-aga n'ihu cross-ikpo okwu ndakọrịta na-agaghịkwa etinye, dị ka Internet Explorer maka UNIX na Windows Media Player maka Mac.
Mmekọrịta nke ụkpụrụ ọkọlọtọ Weebụ California na ọtụtụ steeti ndị ọzọ dị na United States arịọwokwa onye ọka ikpe mpaghara ka ọ gbatịkwuo mkpokọta ntụkwasị obi nke Microsoft ruo afọ ise ọzọ, na-ekwupụta ọtụtụ nchegbu, gụnyere nchegbu nke Microsoft nwere ike ịhapụ ụdị Windows na-esote nwere ike iji ya iji gosipụta ebe a na-egwu egwuregwu na Silverlight, onye ọhụụ Adobe Flash, 'ka onye ọrụ ọrụ nzuzo ahụ kwuru na Seattle Post. Mkpebi ikpeazu na ngagharị ahụ mere ka mkpebi a dị afọ abụọ ruo Nọvemba Disemba 2009, mana maka ebumnuche ndị na-abụghị nke Silverlight. Na Windows 7, nkwụnye ihe nchọgharị weebụ nke Silverlight adịghị arụ ọrụ na akpaghị aka, mana ọ bụ nbudata nbudata nhọrọ ntanetị site na Windows Update.
A katọrọ Microsoft na anaghị eji ọkọlọtọ Scalable Vector Graphics maka Silverlight, nke, dị ka Ryan Paul si kwuo, onye editọ nke Open Ended, akwụkwọ akụkọ ngwanrọ mepere Ars Technica, bụ ụzọ Microsoft si eleghara ụkpụrụ emeghe na ngwaahịa ndị ọzọ anya. Agbanyeghị, dị ka David Betz si kwuo, onye NET ọkachamara na Microsoft nke kachasị baa uru, Microsoft ga-agbanwe nkọwa SVG iji tinye ya na NET, yabụ 'Microsoft, site na ịhọrọ iji XAML karịa SVG, ga-enwe SVG agbakwunyeghi teknụzụ ọ bụla. 'Historylight Silverlight 1 - Silverlight 1, akpọrọ aha Windows Presentation Foundation / N'ebe niile, wepụtara na 2007.
O nwere usoro ihe eji eme ihe maka ọrụ onye ọrụ, ntinye aka na onye ọrụ mmekọrịta, njikwa UI ndị isi, eserese na mmegharị, usoro mgbasa ozi, njikwa ikike dijitalụ, na njikọta DOM. Silverlight 2 - Nwere ụdị nke NET Framework na-emejuputa otu ụdị asụsụ zuru oke oge niile nke NET Framework 3.0; yabụ na ọ nwere ike ịme mmemme edepụtara na asụsụ NET ọ bụla.
A mara ọkwa Silverlight 3 - Silverlight 3 na Septemba 12th, 2008 wee gosi ya na Machị 18, 2009 na MIX09 na Las Vegas. Beta éyo versione ya nda bôte jangan ja ye volô bia na bi bo teke tyi’i na; e wepụtara nsụgharị ikpeazụ na July 9, 2009. Silverlight 3 gụnyere njikwa ndị ọzọ - gụnyere, mana ọnweghị oke na, DataGrid, TreeView, ogwe nhazi dị iche iche, DataForm maka ngwa a chụpụrụ ụdị, na DataPager maka igosipụta data paginated.
snipping ngwá ọrụ arahụ
Silverlight 4 - Na Nọvemba 18, 2009, na Nzukọ Ndị Mmepe Ọkachamara na Los Angeles, Microsoft Corporation kwupụtara ọkwa beta nke Silverlight 4. E bipụtara mbipụta ikpeazụ na Eprel 15, 2010. Ihe ọhụụ ọhụrụ na Silverlight 4 gụnyere: nkwado maka Chrome Google ihe nchọgharị; Igwefoto weebụ na igwe okwu; obibi; Nkwado ndị ọzọ; Nkwado ngosi ọhụụ maka izipu ndị ọrụ ozi; Nchịkwa ọhụrụ na nke ka mma; Thematization nke njikwa; Nsụgharị HTML; nhazi ebe ka mma na ndi ozo.
Silverlight 5 - Emepụtara nsụgharị gọọmentị maka ibudata na Disemba 9, 2011. Ihe ngosi ọhụrụ gụnyere: GPU accelerated decoding, 3D graphics, playback ọsọ ọsọ, njikwa na 64-bit nkwado. Hụ kwa Hikaru Aizawa, mascot nke MicrosoftSilverlight, nke Microsoft Taiwan rụpụtaraExternal Links Official WebsiteSilverlight Developers Center na MSDN Ihe Ọhụrụ na Silverlight 5 Nzọụkwụ na Silverlight 5, Ọtụtụ Demos na Sample Dị.
Ntuziaka nke onye mbido na Silverlightfun na Silverlightfun.com Silverlight Migration Strategies Whitepaper si Wintellect
Kedu ihe kpatara Microsoft Silverlight anaghị arụ ọrụ na mmeri 10?
Nwere ike ịnwale ịwụnye ya ọzọ, site ebe a. Enwere m Windows 10 ma wụnyela Silverlight, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ntụgharị 11, mana ọ bụghị na Edge. IE 11 gụnyere Win 10. Iji chọta ya, pịnye 'Internet Explorer' na igbe ọchụchọ Cortana.
Kedu usoro iji dozie nsogbu Silverlight?
General General to Idozi Nsogbu Silverlight (Installwụnye) ma ọ bụ Njehie (dị ka sistemụ Exception ma ọ bụ njehie 4001) Silverlight Version nkwenye, Sistem chọrọ, na Wụnye ntuziaka (njikọ na Microsoft) InstallSververlight na: Internet Explorer (32-bitor 64-bit) Firefoxor Opera
Kedu ka m ga esi etinye Silverlight na kọmputa m?
Wụnye Silverlight na ihe nchọgharị nke na-akwado nkwụnye: Iji wụnye Silverlight na Windows 10, mepee ihe nchọgharị Microsoft Edge, tinye adreesị nke CTI Navigator Web maka MLS gị, pịa akara ngosi 'More Actions' na aka nri nke Edge toolbar, na họrọ 'Mepee na Internet Explorer.'.
Etu esi lelee mmelite na Microsoft Silverlight?
Ekpe Pịa okwu Silverlight Pịa mmelite taabụ na Microsoft Silverlight nhazi ihuenyo Lelee 'Wụnye mmelite na-akpaghị aka (akwadoro)'. Ọ bụrụ na nhọrọ a adịghị (mgbe ejiri Akaụntụ Akaụntụ Onye ọrụ na Windows), họrọ 'Lelee maka mmelite, mana ka m họrọ ma ...